Ireo antony hanolorana: hamaritra ny fahamarinana
“Tamin’ny niantombohan’ny fivavakao dia nisy teny nivoaka, ka dia tonga hanamabara aminao aho, satria malala indirndra hianao; koa diniho ny teny, ary aoka ho fantatrao ny fahitana” Dan. 9:23
Taorian'ny nandalovan'ny fotoana tamin'ny l844 dia nitady ny fahamarinana toy ny hoe harena nafenina isika. Nihaona tamin'ireo anadahy aho,nianatra sy nanao vavaka mafana izahay. Matetika izahay no
tafaraka tratra alina, indraindray aza ny alina manontolo dia mivavaka mba hahazo fahazavana sy mianatra ny Teny. Hatrany hatrany ireo anadahy dia tonga miara-mianatra Baiboly, mba hahalala ny tiany holazaina, sy mba ho voaomana hampianatra izany amin-kery.Mandritra ny fandalinana, rehefa
tonga amin'ny sehatra izay hilazan'izy ireo hoe: "hatreo no vitantsika". Dia tonga ato amiko ny Fanahin'Andriamanitra. Mahita fahitana aho, ary mahazo fanazavana mazava tsara mikasika indrindra ilay andalana izay hanaovanay fandalinana, miaraka amin'ny tari-dalana toy ny hoe ahoana
no fomba tokony hiasanay sy tokony hampianaranay izany. Io fahazavana io dia nomena mba hanampy anay hahazo ilay teny araka an’i Kristy, ny Iraka nampanaovina Azy, sy ny Asa Fisoronana ataony. Nazava tamiko tamin'ny fomba tsotra fa misy lalam-pahamarinana mivelatra manomboka eo amin'io fotoana io ka hatramin'ny fotoana izay hidirantsika ao amin'ny tanànan'Andriamanitra, ary nomeko ny hafa rehetra izany tari-dalana nomen’ny Tompo ahy izany.
Nandritra izany fotoana rehetra izany dia tsy azoko ny lalan-tsain’ireo anadahy. Voahidy ny saiko, tahaka ny hatramin’izay ihany, ka tsy afaka nahazo ny dikan'ireo teny nodinihinay ireo. Anisan'ny fahoriana lehibe teo amin'ny fiainako izany. Toy izany hatrany no fahatakaran'ny saiko zavatra mandra- pahatongan'ireo teboka lehibe momba ny finoantsika ho tena nazava tsara tao an-tsainay, ka tsy mifanohitra amin'ny Tenin'Andriamanitra. Fantatr'ireo anadahy fa rehefa tsy rnisy fahitana dia tsy afaka mahatakatra ireo zavatra ireo aho, ary dia nekeny ho fahazavana mivantana avy any an-danitra ireo fanambarana nomena. Betsaka ny fahadisoan-kevitra nipoitra, nefa na dia kely noho ny zaza aza aho, dia nirahin’Andriamanitra avy amin’ny toerana iray ho amin’ny toerana iray mba hananatra mafy ireo izay mitana ireo fampianaran-diso ireo. Nisy aza ireo izay efa eo amin'ny toerana mampidi-dozan'ny fakàna tendrony (fanatisme), dia nasaina aho tamin'ny anaran'ny Tompo mba hitondra fampitandremana avy any an-danitra ho azy ireo.